बिचित्र सँसार, बिचित्र मान्छे !! - Khabar Center
१८ बैशाख २०७९
बाउ आमाको पाखुराले बनेको / आर्जेको (पालित र पोषित) ज्यान बाउ आमाको आँशुले सिँचित नगर !!!
पैसा, अँश, जिउनी आउँछ जान्छ । बुढा बुढीको आँसुले पिर्छ । माता तिर्थ र कुशे औँसी बर्सेनी आउँछ जान्छ । बुढा बुढीको मनको पीडा मन मै दबियेर बस्छ बुढेसकालमा आफ्नो चाहना पुरा होला कि भनेर । बुढा बुढीको दोहन गरेर पितृभक्ति मातृभक्ति प्रमाणित नगरौँ !!! पिर्छ ! पिर्छ !!! फुटो हालेर मात्र केहि हुन्न !!!
कामले मार्ने अनि फुटो पोस्ट्यायेर नाटकको मातृभक्ति वा पितृभक्ति देखायेर केहि हुन्न । बाउ आमा पालिराखेको छु भन्ने भ्रम वा आवरणमा बाउ आमाको दोहन पो गरिराखेका छौँ कि ? बाउ आमाको जीउनी पनि झ्वाम पार्ने अनि बाउ आमालाइ आफ्नो आर्थिक लाभको लागि बाउ आमाको हड्डी घोटाउने उनिहरुलाइ रुवाइ रुवाइ ।
अनि समाजलाइ प्रमाणित गर्न खोज्ने कत्ति न बाउ आमा पालेको छु भनेर । जिउनी कुनै छोरोले पड्काइ सक्यो । उसँग बस्न मन छैन । उसको स्वास्नीको बुहार्तन खप्न मन पनि छैन ।
बाउ आमा त्यो नौटँकी स्वार्थी छोरोको घर छोडेर अर्को छोरो कहाँ जान पनि सक्दैनन लाजले । खाली हात छ । जिउनी कुम्ल्याइ सक्यो एउटोले पहिल्यै । बाउ आमाको जिउनी कुम्ल्यायेर, बुढेशकालमा तिनको हड्डी पनि नघोटी त्यो छोरोको घर चल्दैन ।
त्यसको आर्थिक लाभ हुन्न । बाउ आमाले घर चलाइ दियेर बाउ आमाले नै उसलाइ र उसको स्वास्नी छर्छरी पालि दियेका हुन्छन । उ चाहिँ बाउ आमा पाल्या छु भनेर डँका पिट्छ । "तेति काम नगर्ने हो बा र आमाले भने सुगर प्रेसरले बा आमा उहिल्यै मरिसक्थे" भनेर उल्टै महान पनि बन्छ ।
प्रकाशित मिति :बैशाख १८ २०७९ आइतवार - १०:४७:१६ बजे
काठमाडौंको गुह्यश्वरी खोला किनारमा एक युवको शव फेला
लोकसेवा आयोगले तोक्यो परीक्षा केन्द्र, यस्तो छ सुचना
बीमा समितिले प्रकाशित गर्‍यो लिखित परीक्षाको मिति र समय (तालिकासहित)
नेपाल बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो लिखित परीक्षाको नतिजा, को–को भए छनौट ? (सूचनासहित)
काठमाडौं महानगर: अन्तिम ३ वडाको मतगणना जारी, कसको मत कति ?
एमसीसी, नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय हीत
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सकारात्मक पाटा, अप्ठ्यारा र एशोसिएसनमा समावेशीताको सवाल
योद्धा उपन्या सः एक दृष्टिः